Ahoana ny fomba hiatrehana ny aretin-tsaina ao anatin'ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 19/07/2021 22:40 | Psychology
Ny fiainana miaraka amin'ny olona voan'ny aretin-tsaina dia zavatra tena sarotra, indrindra raha ny vadinao io. Tsy mora izany ary raha tsy hainao ny mitondra aretina toy izany dia mety hiteraka korontana ny fifandraisana rehefa mandeha ny fotoana.
Mba hisorohana ireo mpivady manana daty lany daty, Zava-dehibe ny fanarahan'ny roa tonta ny toe-javatra toy izany sy hianarany miaina miaraka amin'izany. Hanome andian-torolàlana hanaraka anao izahay mba ho salama araka izay azo atao ny fifandraisana na eo aza ny fikorontanan'ny saina iray amin'ireo antoko.
1 Tohano ny mpivady
2 Mianara momba ny aretin-tsaina
3 Avelao hiasa ireo matihanina
4 Ny maha-zava-dehibe ny fitsaboana
Tohano ny mpivady
Tsy mora ho an'ny olona ny mahita fa voan'ny aretin-tsaina izy ireo, indrindra raha misy fifandraisana. Amin'ity tranga ity, ny olon-kafa dia tokony haneho anao ny fanohanany tanteraka ary hampita anao amin'ny fotoana rehetra fa tsy irery ianao. Ny fahatsapana fa tsara noho ny fananana ny fanohanana sy ny fitiavana ny sakaizanao dia tena ilaina amin'ny resaka fandresena aretina ara-tsaina toy izany.
Mianara momba ny aretin-tsaina
Raha vantany vao natao ny aretina azo antoka fa voan'ny aretin-tsaina ilay olon-tiana, fotoana izao hanangonana vaovao betsaka araka izay azo atao momba ny aretina toy izany. Tsara ny manatona matihanina na tranokala malaza izay manampy hahalala bebe kokoa momba ny korontana toy izany ary amin'izany fomba hanampiana ny mpivady amin'ny fomba mety.
Avelao hiasa ireo matihanina
Ny faniriana hianatra momba ny aretina dia tsy manome alalana ilay olona ho tonga mpitsabo amin'ny vady aman-janany. Raha jerena izany dia tsara kokoa ho an'ny matihanina ny manao ny asany satria fantany izay ataony ary afaka manampy amin'ny fitsaboana aretina toy izany. Ny asan'ny mpivady dia tokony hanohana amin'ny zavatra rehetra ilaina ary haneho fitiavana azy ireo rehefa mila azy ireo.
Tsara ny mitadidy fa ny marary dia tsy afaka manankina ny andraikitra rehetra amin'ny sakaizany. Ny olona mijaly amin'ny aretina toy izany dia tsy maintsy mandray ny anjarany ary manao izay rehetra azo atao mba handresena izany fikorontanana izany ary fa amin'izany fomba izany dia tsy manimba ny fifandraisana mihitsy amin'ny fomba ratsy.
Ny maha-zava-dehibe ny fitsaboana
Ny fandehanana amin'ny fitsaboana dia tena zava-dehibe tokoa raha ny amin'ny fandresena ny fikorontanana toy izany sy sorohy io aretina io mba tsy hanimba ny fifandraisana. Ny torohevitra tsara dia manampy ny mpivady hahay hifehy ny fihetsem-po isan-karazany izay mitranga vokatry ny aretina toy izany. Zava-dehibe ny fiantohana fa ny mpivady no mahasalama indrindra na eo aza ny olana mety hitranga noho ny fananana aretina ara-tsaina.
Raha fintinina dia tsy mora ny miara-mipetraka amin'ny mpiara-miasa izay voan'ny aretin-tsaina. Na izany aza, azo atao ny manana fifandraisana salama izay ahafahan'ny olona roa manamafy ny fitiavany sy ny fitiavany. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fifanohanana ary ny fahalianana amin'ny fitsaboana aretin-tsaina toy izany. Na mandeha amin'ny fitsaboana na amin'ny matihanina, iza no mahay manampy ny marary handresy olana sy hikarakara ny fifandraisan'ny mpivady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Ahoana no hiatrehana ny aretin-tsaina ao anatin'ny mpivady